सबैभन्दा लोकप्रिय महिला सैलुन को एक शैली धेरै बाल बीच केवल "एक विधिपूर्वक" छ। यो लगभग प्रत्येक निष्पक्ष सेक्स को विश्वव्यापी र उपयुक्त मान्न सकिँदैन। मुख्य कुरा - चलाखीपूर्ण आफ्नो कमीकमजोरी लुकाउँछ जो बिछाउने को विकल्प, चयन गर्न र यसलाई उपस्थिति को लाभ जोड हुनेछ। तुरुन्तै सैलुन "विधिपूर्वक", केवल छोटो कपाल हो कि दुर्लभ अवस्थामा, यो मध्यम-लम्बाइको कर्ल मा गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्नुपर्छ। तपाईं आफ्नो लामो कपाल भागमा चाहनुहुन्छ भने, यस्तै स्टाइल लागि छैन।
अब प्रविधि यो केश अगाडी मा र कसरी नजीकको स्टाइल। माथि उल्लेख रूपमा, सबै भन्दा अक्सर यो लम्बाइ काम गर्न सजिलो छ देखि, सैलुन छोटो कपाल लागि "विधिपूर्वक" गरेको। को विजार्ड सुरु गर्न बाल तल आधा अलग र यो काम। यस्तो केश सिर्जना कला को दिल मा को सिद्धान्त हो "Strand द्वारा Strand।" त्यो हो, कपाल तल्लो भाग बिस्तारै एक द्वारा एक नामित प्रदान, प्रत्येक जो अघिल्लो एक बराबर छ दाढी। फलस्वरूप, केश को थोक अलिकति भङ्ग लाइन छ, तर अझै पनि तल लाइन खाली गर्नुहोस्।
अर्को सैलुन "विधिपूर्वक" केश माथि छ। तिनीहरूले मात्र शीर्ष-को अनुहार देखि एक दिशा मा, एउटै तरिकामा छोट्याउन छन्। अक्सर, क्रममा सैलुन गर्न सबैभन्दा आकर्षक कपाल को क्यालिब्रेसन विधि लागू देख्यो। यो अन्त गर्न, प्रत्येक Strand टाउको लम्ब झिकेर र 45 डिग्री को एक कोण मा कटौती। चिकना र सीधा बाल, तल्लो भाग मात्र एउटा सानो रकम संग - यो काम को परिणाम।
अब सबैभन्दा लाभप्रद हेर्नेछौं सैलुन "विधिपूर्वक" बिछाउने के हेरौं। यस्तो केश को संरचना मा कुनै समस्या छैन भएकोले विशेषज्ञहरु स्वाभाविक बाल सुक्खामा सुझाव दिन्छौं। कि पछि, तपाईं forceps को सुझाव ट्रिम गर्न सक्छन् र बिस्तारै लाह को परिणाम ठीक। आफ्नो प्रकृति भने बाल घुम्रेको छ, यसलाई खींच भने, आफ्नो हेयर ड्रायर सुखाने, र त्यसपछि directness फलाम प्रयोग गरेर फेरि दिनको मनमोहक छ। वास्तविक को जरा मा एक सानो bouffant लाग्न सक्छ। केश सीधा रहनुपर्छ किनभने यसले यो ज्यादा छैन मात्र महत्त्वपूर्ण छ।
यो पनि सैलुन "विधिपूर्वक" एक लम्बी आकार को अनुहार संग पातलो केटी मा सिद्ध देखिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो धमाका वा sloping सीढी, ठूलो cheekbones, पूर्णतामा लुकाउन सक्छन् जो, र यति मा प्रदान गर्दैन। तर, केही अवस्थामा, यस्तो प्याक सुशोभित र भव्य महिलाहरु। एक cheekbones कवर गरिनेछ जो मानक टाउको को सामने मा नरम कर्ल को एक जोडी "विधिपूर्वक", थप्न मात्र छ। तिनीहरूले त्यसपछि मात्र ट्रिम गर्नुपर्छ तर कुनै पनि मामला मा कर्ल छैन।
सबैभन्दा सरल को एक, तर एकै समयमा आकर्षक र बहुमुखी stowage मानिन्छ महिला सैलुन "विधिपूर्वक"। यसको विभिन्न व्याख्याहरु फोटो लेख मा प्रस्तुत, र तिनीहरूलाई ध्यान, तपाईं इच्छित विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा - आफ्नै अनुहार को peculiarities बारेमा भूल र जोड छ कि यो आफ्नो मर्यादा छ गर्नेछ केश को प्रकार चयन छैन।
बाल विकास को लागि शैम्पू: को प्रभावकारिता, वा प्रचार स्टन्ट मा समीक्षा?
पुच्छर को एक सुन्दर केश कसरी बनाउने?
डी dreadlocks - असामान्य, स्टाइलिश, सुन्दर
कसरी आफ्नो बाल मोटा बनाउने? कसरी पातलो कपाल मोटा र मोटा बनाउने?
"सपना2को साथ अवलोकन गरियो": अभिनेता र भूमिका, जीवनी। डोरामाको दोस्रो सिजनको अभिनेताहरूको फोटो
कारणहरू, उपचार विधि र सुविधाहरू: यो चिबुक कम
तपाईं टर्की मा राफ्टिंग बारेमा जान्नु आवश्यक छ के
डोनो ब्राम्न्ट इटालियन पुनर्जागरणको उत्कृष्ट वास्तुकार हो
फिलिप्स उस्तरा। सान्त्वना र समय मोल गर्नेहरूका लागि व्यक्तिगत हेरविचार
मह संग मरिच कसरी खटाई मा हालन गर्न? जाडो तयारी लागि विकल्प
लागूपदार्थ 'Flucostat' र 'JUnidoks Soljutab'। प्रयोगको लागि निर्देशन
चालु को स्वास्थ्य लाभ के हुन्?